Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Filazantsara sinôptika : Fahasamihafan'ny versiona roa
Filazantsara sinôptika (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2017 à 03:23
3 022 octets ajoutés , il y a 4 ans
Fanampiana fizaràna sy antsipiriany maro
Endrik'io pejy io tamin'ny 16 Septambra 2017 à 18:51 (hanova)
(Pejy vao foronina momba ny fivavahana sy ny asa soratra)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2017 à 03:23 (hanova) (esory)
(Fanampiana fizaràna sy antsipiriany maro)
'''Filazantsara synoptika''' na '''Evanjely synoptika''' no ilazana ireo filazantsara telo voalohany ao amin'ny Baiboly, dia ny ''Filazantsara araka an'i Matio'' sy ny ''Filazantsara araka an'i Marka'' ary ny ''Filazantsara araka an'i Lioka''. Atao hoe synoptika izy ireo noho izy maneho amin'ny fomba mitovy amin'ny ankapobeny ny fiainana sy ny fampianaran'i Jesoa Kristy.Ny teny hoe synoptika dia avy amin'ny teny hoe synopsis "fitoviam-pijery". Misy fitovizany maro ireo Filazantsara ireo, ka ozo inoana fa nanovo tamina loharano tokana na mitovy.
Ny teny hoe ''synoptika'' dia avy amin'ny teny grika hoe ''συνοψις'' (''synopsis / sunopsis'') izay azo sarahana roa, ''συν'' (midika hoe : « miaraka ») sy ''οψις'' (midika hoe « mahita »). Ny hoe ''synopsis'' izany dia azo adika ara-bakiteny hoe "fitoviam-pahitana" na "fitoviam-pijery". Ny hoe ''synoptika'' (avy amin'ny teny grika hoe συνοπτικός / ''synoptikos'') dia azo adika hoe "manao indray mijery", satria azo atao mifanila ireo asa soratra telo ireo.
== Fampitahana ireo Filazantsara synoptika ==
Misy fitoviany maro ireo Filazantsara ireo. Na dia izany aza dia samy manana ny mampiavaka azy ihany koa izy ireo tsirairay.
=== Fitovianan'ny Filazantsara ===
Ny fitoviana ao amin'ireo Filazantsara synoptika dia mety ho an'izy telo miaraka na ho an'ny tsiroaroa fotsiny.
==== Fitovian'ny Filazantsara telo ====
Izao avy ny fitoviana hita:
- ny amin'ny Jaona mpanao batisa;
- ny nanaovam-batisa sy ny nakan'ny devoly fanahy an'i Jesosy;
- ireo mpianatr'i Jesosy voalohany;
- ny tsy finoan'ny mpiray tanàna amin'i Jesosy azy;
- ny fanasitranana ny rafozam-bavin'i Petera sy ireo demoniaka ary ireo boka;
- ny fitaomana ilay mpamory hetra;
- ny amin'ny divao vaovao atao anaty fitehirizana efa tonta;
- ny fanasitranana ilay olona malemy tanana;
- ny fonirahana ireo Apostoly;
- ny amin'i Belizaboba;
- ny fanoharana ny amin'ny fandrobana ny tranona lehilahy matanjaka iray, ny fahotana amin'ny Fanahy Masina, ireo tena havan'i Jesosy, ny amin'ny mpamafy, ny fanaovan-jiro ao ambany vata famarana, ny amin'ny tsimparifary;
- ny nampitsaharany ny rivo-mahery;
- ny nandroahana devoly tany Gadara;
- ny zanakavavin'i Jairo, ny nanasitranana ilay vehivavy mivoa-dra;
- ny namokisana olona dimy arivo;
- ny fiaikem-pinoan'i Petera;
- ny fiovan-tarehy;
- ilay zazalahy misy demonia;
- ny amin'ireo zazakely;
- ilay lehilahy mpanankarena mbola tanora;
- ny fanambaran'i Jesosy ny amin'ny hahafatesany;
- ilay lehilahy jamba teo akaikin'i Jeriko;
- ny fitsenana an'i Jesosy tamin'ny sampan-kazo;
- ny fandroahana ireo mpanakalo vola tao an-tempoly;
- "Omeo an'i Kaisara izay an'i Kaisara";
- ny amin'ireo fariseo sy mpanoradalàna;
- ny amin'ny andro farany;
- ny fiaraha-misakafo farany, ny fiaretan'i Jesosy, ny nanomboana sy ny nandevenana azy;
- ny fasana foana sy ny fitsanganany ho velona;
- ny fanirahana hampieny ny fampianarany.
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Marka ====
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Matio sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
==== Fitovian'ny Filazantsaran'i Marka sy ny Filazantsaran'i Lioka ====
=== Ny fahasamihafany ===
Misy ireo andalan-tsoratra izay ana filazantsara iray manokana fa tsy hita amin'ny filazantsara roa hafa. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny ''Filazantsaran'i Lioka'' (9.5 sy 18). Ny tantaran'ny fahazazan'i Jesoa sy ny toriteny teny an-tendrombohitra, dia tsy hita ao amin'ny ''Filazantsaran'i Marka''. Fanoharana maro no tsy hita ao amin'ny ''Filazantsaran'i Lioka''. Ireo fisehoan'i Jesoa avy nitsangana tamin'ny maty dia tsy hita ihany koa ao amin'ny ''Filazantsaran'i Marka''.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/807906"